COVID-19 ANTONTAN’ISA 31 MAY 2021 - ewa.mg
COVID-19 ANTONTAN’ISA 31 MAY 2021
News - Santé - COVID-19 ANTONTAN’ISA 31 MAY 2021
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19 ANTONTAN’ISA 31 MAY 2021 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
Isan’ny nanaovana fitiliana: 202
Tranga vaovao: 24
4 Matsiatra Ambony
3 Amoron’i Mania
Tranga misy fahasarotana: 142
Namoy ny ainy: 02
L’article COVID-19 ANTONTAN’ISA 31 MAY 2021 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Nivoaka tamin'ny : 01/06/2021
Taksibrosy avy any Itasy: miverina eny Imerintsiatosika ny farany
Misokatra ny fitaterana rehetra eto amintsika, amin’ny 5 ora maraina hatramin’ny 3 ora tolakandro, afa-tsy ny zotra nasionaly sy rezionaly miditra na mandalo eto Antananarivo, Toamasina ary Fianarantsoa. Tsy maintsy harahina kosa ny fepetra ara-pahasalamana rehetra.Nanitsy ny fanapahan-kevitry ny governoran’Itasy, ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT), mikasika ny fetra fijanonan’ny fiara mpitatitra avy any amin’ny faritra Itasy, miakatra aty Antananarivo. Nilaza mantsy ity farany fa ferana eny Ambatomirahavavy ny fijanonan’ny fiara avy any andrefana. Araka ny fivoriana nataon’ny ATT, omaly, nilaza ny tale jeneraliny (DG), ny Jeneraly Reribake Jeannot, fa tsy nekena io fanapahan-kevitry ny governora Itasy io, ka naverina eny Imerintsiatosika, fetra manasaraka amin’ny faritra Analamanga, ny fiantsonana farany ny zotra avy any Itasy.Tsy misokatra ny rezionaly Analamanga,…Nisy rahateo ny fampahafantarana (naoty) navoakan’ny minisiteran’ny Fitaterana (MTTM), ny 23 avrily teo, fa miverina miasa ny zotra nasionaly sy rezionaly, afa-tsy ireo izay miainga na mandalo an’Antananarivo, Toamasina ary Fianarantsoa. Nohamafisin’ny DG, ny Jly Reribake Jeannot, fa “tsy misokatra ny zotra rezionaly ato amin’ny faritra Analamanga, toy ny mankany Anjozorobe, Manjakandriana, Andramasina, sns”. Tsy maintsy arahina daholo anefa ny fepetra ara-pahasalamana efa napetraka (elanelana 1m, arovava, fanafody, fanasana Tanana,…).Njaka Andriantefiarinesy Manamarika ny ATT, fa tsy azo atao mihitsy ny manondrotra saran-dalana manerana ny Nosy. Koa, raha mahita fiara mampiakatra saran-dalana ny olon-drehetra, ny mpandeha, azo antsoina ny laharana 034 49 987 64 ho an’ny taxi-be eto Antananarivo Renivohitra (zone urbaine), ary ny laharana 034 07 213 63 , na mandefa SMS amin’ny 034 05 509 28 raha zotra manodidina an’Antananarivo (suburbaine). L’article Taksibrosy avy any Itasy: miverina eny Imerintsiatosika ny farany a été récupéré chez Newsmada.
Tokony ho vita mialoha ny fialan-tsasatra lehibe ny fandoavana ny tambin-karaman’ireo mpampianatra rehetra, toy ny an’ireo mpitsara fanadinam-panjakana, araka ny filazan’ny minisiteran’ny Fanabea­zam-pirenena. Tetikasa maro no kasain’ny minisitra hatao. Anisan’izany ny fandraisana mpampianatra vaovao. L’article Tambin’ny mpampianatra est apparu en premier sur AoRaha.
« Lalao olympika » – Tokyo: mpikatroka malagasy dimy efa nahazo tapakila
Atleta malagasy miisa dimy mianadahy amin’ny taranja fanatanjahantena telo samy hafa ny efa nahazo ny tapakilany hiatrehan’izy ireo ny « Lalao olympika » any Tokyo, hatramin’izao. Eo amin’ny taranja lomano, hiaro ny voninahi-pirenena malagasy sy isan’ireo solontenan’i Afrika Rasolonjatovo Michael sy Rabarijaona Mureille. Etsy ankilany, hanatevin-daharana ireo mpikatroka malagasy hiazo an’i Japana koa Andriatsitohaina Eric sy Andriatsitohaina Tojo. Anisan’ny nandrombaka medaly volamena teo amin’ny fibatana fonjamby tany amin’ny fiadiana tompondakan’i Afrika tany Kenya izy mirahalahy ireo, ny volana mey lasa teo. Andro vitsy lasa koa, nahazo ny tapakilany i Nomenjanahary Damiella izay judokas malagasy avy niatrika ny fiadiana tompondaka eran-tany tao Budapest. Miisa dimy mianadahy, araka izany, ireo mpikatroka malagasy efa nahazo ny tapakilany hiatrehana io « Lalao olympika » any Tokyo io amin’izao fotoana izao.Tsiferana R.L’article « Lalao olympika » – Tokyo: mpikatroka malagasy dimy efa nahazo tapakila a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Orange pro league 2021»: nisaraka 1 sy 1 ny Jet Kintana sy ny Fosa Jr Boeny
Tsy nisy ny mpandresy teo amin’ny fihaonan’ny Jet Kintana Itasy sy ny Fosa Jr Boeny, teo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “Orange pro league”.Nisaraka ady sahala, 1 sy 1, ny Jet Kintana Itasy sy ny Fosa Jr Boeny, teo amin’ny andro fahadimy hiadiana ny “Orange pro league”, taranja baolina kitra ho an’ny kaonferansy avaratra. Fihaonana, notanterahina ny asabotsy lasa teo, teny amin’ny kianja Elgeco Stadium By Pass. Lalao tena nandrasan’ny rehetra tokoa ny an’ny roa tonta. Niady ary tena nisehoan’ny taktika sy ny teknikan’ireo mpilalao andaniny sy ankilany izany.Ekipa roa samy manana ny mampiavaka azy. Nampiasa ny tolotolotra haingam-pandeha ny Jet Kintana, notarihin-dry Dody sy ry Tsito. Toy ny mahazatra azy kosa, tolotra lavitra arahina hazakazaka, nahitana an’i Jean-Yves sy i Besna, any an’ny Fosa. Nampiditra ny baolina voalohany ny Jet Kintana, tamin’ny alalan’i Tsito, teo amin’ny minitra faha-19. Nitarika tamin’ny isa 1 no ho 0 ny ekipan’Itasy.Tsy nahakivy ny Fosa Jr izany fa nanao totoafo ny fanafihana. Nahitam-bokany izany teo amin’ny minitra faha-45. Baolina tafiditr’i Sambatra.Fidirana faharoa, somary nanantombo teo amin’ny fanafihana ny Fosa Jr, saingy tratry ny fikoropahana hatrany i Gyldas sy i Elefoni ary i Jean-Yves, tokony hahafaty ny baolina faharoa. Nifangaro tao amin’ny Jet Kintana kosa ny fikoropahana ka betsaka loatra ireo baolina very. Tsy nisy intsony ny baolina maty, na samy nitady irika hamonoana izany aza, ny ekipa roa tonta.Nahazo isa 3 ny Cosfa (Bebaoty)Teo amin’ny lalao iray, ho an’ity kaonferansy avaratra ity hatrany, naka isa 3 ho azy ny Cosfa (Bebaoty), rehefa nandavo ny Tia Kitra Atsinanana, tamin’ny isa mazava 4 no ho 1. Tsy niady satria teo amin’ny 45 mn voalohany ihany ny hany mba nahatohitra ny Tia Kitra, nisarahana tamin’ny isa 2 no ho 1. Baolina roa tafiditr’i Rivah, minitra faha-22, sy ny an’i Mihaja, minitra faha-28, ny an’ny Cosfa. I Angelo kosa no nahafaty ny baolina tokana ho an’ny Tia Kitra.Nanjakan’ny Bebaoty kosa ny fizaram-potoana faharoa ka nisesy ny baolina matin’izy ireo, tamin’ny alalan’i Ravelino, teo amin’ny minitra faha-31, sy ny an’i Lava, 4 mn tsy hiravana. Tompondaka Kaonferansy avaratraKianja Elgeco Stadium By Pass-Cosfa (4) – (1) Tia Kitra-Jet Kintana (1) – (1) Fosa Jr Boeny Kaonferansy atsimoKianja Elgeco Stadium By Pass-Uscafoot (1) – (0) Zanakala FC-AS Adema (2) – (0) 3FB ToliaraKianja Ampasambazaha-FC Ilakaka (3) – (1) CS-DFC L’article Kitra – «Orange pro league 2021»: nisaraka 1 sy 1 ny Jet Kintana sy ny Fosa Jr Boeny a été récupéré chez Newsmada.
Kitra: hitondra ny marika Errea Sport ny Fosa Jr
Araka ny vaovao hita tao amin’ny tambajotran-tserasera, nivoaka omaly alahady, fantatra fa hitondra ny marika Errea Sport, ny ekipan’ny Fosa Jr Boeny, tompondaka sady tompon’ny amboaran’i Madagasikara, taranja baolina kitra, eo amin’ny fiatrehana ny fifaninanana afrikanina, hanomboka ny 10 aogositra ho avy izao.Nanao ny fifanarahana i Angelo Gandolfi, mpitantana ny Errea, sy i Steenkist Arno, filohan’ny Fosa Jr Boeny, natrehin’i Mister D’Aversa Carlo Stronati, tomponandraikitry ny Errea, aty amin’ny faritr’i Afrika sy i Balkans.Raha tsiahivina, anisan’ny ekipa zandriny eto Madagasikara ny Fosa Jr, ary efa manana ny toerany sy ny lazany, tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany Afrika. Namoaka mpilalao mandrafitra ireo ekipa any ivelany, raha tsy hilaza afa-tsy i Dax, milalao ao amin’ny Kaizer Chiefs, Afrika Atsimo.Manana mpilalao ao amin’ny Barean’i Madagasikara ihany koa na ireo miatrika ny “Lalaon’ny Nosy”, na ny amin’ny fifaninanana “Chan 2019” na ny tamin’ny “Can”, natao tany Egypta farany teo. TompondakaL’article Kitra: hitondra ny marika Errea Sport ny Fosa Jr a été récupéré chez Newsmada.
Fisotroan-dronono Cnaps: hisitraka ny tolotry ny BOA ny zokiolona
Natao sonia, omaly, ny fifanarahana eo amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) sy ny banky BOA Madagasikara. Votoatin’ny fifanarahana ny fahafahan’ny mpahazo fanampiana sy fisotroan-dronono ao amin’ny Cnaps, hisitraka ny tolotra omen’ny banky BOA, anisan’ny miparitaka indrindra manerana ny Nosy. Tafiditra ao anatin’izany ny tolotra niomerika manaraka ny fandrosoan’ny teknolojia.Nilaza ny tale jeneralin’ny Cnaps, Rakotondraibe Mamy, fa mahatsapa tokoa izahay fa manana olana. Toa lasa fahazarana ny mahita ireo zokiolona sy ny mpikambana Cnaps marobe, milahatra mandritra ny fotoana ela rehefa mandray ny volany eny amin’ny banky sy ny sampandraharaha mikraofinansa. Namaly ny antsonay hamahana ny olana ny banky BOA ka misy ny tolotra samihafa omena ny mpanjifa. Toy ny fitahirizam-bola maharitra (compte epargne) tsy asiana sarany, miaraka amin’ny karatra banky, ka azo atao ny maka vola eny amin’ny Gag, manerana ny masoivoho miisa 94 eto Madagasikara. Arotsaky ny Cnaps mivantana any amin’ny BOA ny vola tahirizin’ny mpikambana. Tombontsoa roa ny ho azon’ny zokiolona satria hihena ny filaharambe, ary faharoa, hahazo tombony amin’ny fifanakalozam-bolan’ny Cnaps sy ny BOA ny mpanjifa.Ho an’ny tale jeneralin’ny BOA, i Othmane Alaoui, dingana vaovao izao fiaraha-miasan’ny roa tonta izao. Aman’aliny ny zokiolona mandray fisotroan-dronon’ny Cnaps, hisitraka ny tolotry ny BOA, indrindra ny teknolojian’ny niomerika, manamora ny fampiasana ny fifanakalozana vola voizin’ny BOA.Njaka A. L’article Fisotroan-dronono Cnaps: hisitraka ny tolotry ny BOA ny zokiolona a été récupéré chez Newsmada.